Koox Uu EPL Ka Jecelyahay, Inuu CR7 U Iibin Lahaa & Feeryahan Mayweather Oo Ka Nixiyay Jamaahiirta Real %
Feeryahanka caanka ah ee lagu magacaabo Floyd Mayweather, ayaa wuxuu sheegayaa inuu diyaar u ahaa inuu maalgashada kooxda EPL ka dheesha ee Newcastle United, isagoona daboolka ka qaaday in hadii uu sidaas sameeyo uu Cristiano Ronaldo usoo iibin lahaa.
Mayweather iyo Ronaldo ayaa labo qofood oo saaxiibo ah, iyagoona iskala soo muuqday baraha bulshada iyo goobo kale marar badan.
Xidigaan reer Ameerika ee Mayweather, ayaa wuxuu sheegayaa in sababta uu u iibsan lahaa Newcastle, oo hada raadineysa cid iibsatay ay tahay inuu Magaalada jecel yahay.
“Waan jeclahay Newcastle, wiilashaani waxay jecel yihiin inay ku dabaaldegaan sida magaalo kasta oo adduunka ah, waxaan ogaaday in qaar ka mid ah ciyaartoyda sannadkii hore inay ahaayeen kuwa fiican,” ayuu yiri, Floyd Mayweather.
“Waxaan mar walba eegaa fursado cusub oo ganacsi ah, waan jeclahay ciyaaraha oo dhan, laakiin waxaan maalgashadey madaxeyga oo ma ahan wadnaha.
“Inaad maalgashato qalbiga waxay si deg deg ulumineysaa lacagta, laakiin hadii qof uu si wada jir ah kuula jiro ganacsiga kadib waxaad keeni kartaa qorsho aan iigu sheegi karo, hadii aan lacag sameeyo, kadib waan maalgashan lahaa.
“Laga yaabee kuabda cagta, ma ahan kaliya kulankeyga, waxaan ku xiran lahaa meel kale,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Crsitiano [Ronaldo] wuxuu saaxibkeyga dhabta ah uu yahay waqti dheer, waxaana xitaa awoodi lahaa inuu xirfadiisa kusoo gaba gabeeyay Newcastle,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyey, Feeryahanka caanka ah ee Floyd Mayweather.